Indlela ukufunda izisekelo nemidwebo inyanga engu-1
Kumiswa, Imfundo Inthanethi
Lubhalomagama - yinqubo lokunikeza nezwi ngesikhathi ukuphrinta. Ngasekuqaleni kwaleli art yayidumile kakhulu ngenxa yokuthi okukhiphayo ukukhanya ezihlukahlukene izincwadi, amaphephandaba kanye nomagazini. Kunyatheliswa bayindlala kakhulu, ngakho-ke abantu abenza endlini ukunyathelisa, ezazidingeka kakhulu. Nokho, namuhla asikwazi ukuthi wabezindaba uhlangabezana ubudala kangcono, njengoba bonke ubuyisela Inthanethi. Ngokwemvelo, lapho namanje ishicilelwe kanye namaphephandaba, nomagazini, kodwa kabasebabili komthombo ulwazi. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi isethi nokuma umbhalo kuzofuneka ukuthi ziphelelwe yisikhathi, futhi abantu abahilelekile kule, ahlale ngaphandle umsebenzi. Kodwa eqinisweni, konke akunjalo, ngoba yilokho-inthanethi futhi baba uyisiphephelo laba bantu, ngoba ulwazi namanje ezinyathelisiwe. Ngakho, typographers namasevisi ahlale ethandwa kuze kube yilolu suku. Ngaphezu kwalokho, ngo-nsuku zonke zabo kukhona kakhudlwana futhi kuswelekile kakhulu, ngoba mncintiswano ukhula, futhi zonke iwebhusayithi ifuna amafonti bakhe nezinye izici udaba zazingcono kakhulu. Ngakho, uma ufuna ukufunda izisekelo nemidwebo, kufanele bathathe leli cala eduze, ngoba manje ethandwa kakhulu futhi esingakulethela engenayo eside.
Lubhalomagama web design
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi kubalulekile ukuba sitadishe nomklamo wewebhu ukuze sizuze ulwazi ledzingekile nemidwebo. Kodwa lokhu akulona iqiniso evame kakhulu - yokuthi umklamo web ngokwayo kuthinta kuphela izinto eziyisisekelo nemidwebo, ngakho uma wahlanganyela nomklamo wewebhu, ngeke kube typographer professional ngokuzumayo abanolwazi. Ukuze wenze lokhu, banayo izifundo zabo ngabanye, tincwadzi tifundvo tabo ulwazi olwengeziwe, okuyinto, ngenhlanhla, uzoba awanandaba ekutholeni inetha. Yena babhekana nazo zonke imisebenzi, wena ehluke uzobona idokhumenti umbhalo, bakwazi ukusingatha amafonti nosayizi yabo bazokwazi ukuhlela umbhalo ekhasini, futhi okubaluleke - kusayithi e inethiwekhi. Futhi ingxenye engcono lapha ukuthi lokhu kuyoba okwanele esingangenyanga, uma ngokucacile ngamabomu umshado.
Ngakho lapho uqala ukufunda mayelana nale ndaba, yini ngokwemvelo Kudingeka ukuthi uqale izinto eziyisisekelo futhi ngesikhathi rush efanayo wena neze zinkulu. Azithulele ngiziphuce ngesonto ukufunda yonke imiqondo eyisisekelo nobudlelwano bawo nemibandela yokusetshenziswa. Qiniseka ukuthi ungakwazi ukuhlukanisa phakathi amafonti eyisisekelo, uyazi, kuleso simo kungcono ukusebenzisa ifonti ethile, indlela yokwenza nangezindlela, ehlukile kunaleyo amafonti ezahlukene nokunye. Hlola isakhiwo izinhlamvu ifonti ethile, ngoba kusukela kule kuzoncika ukusetshenziswa kwalo ngezindlela eziningi - udinga ukuthola amafonti, le zinhlamvu ngokucebile ehlotshisiwe, ngazo kancane ebonakalayo, futhi lapho abekho. Kuphela uma kufanele ube isisekelo ocebile theory ezintweni eziyisisekelo, ungakwazi udlulele esinyathelweni esilandelayo.
Hlanganisa futhi ngcono
Uma une ulwazi olwanele theory, uzokwazi ukuhlanganisa ekutadisheni theory kanye umkhuba. Isinyathelo esilandelayo ngoba kufanele ube inhlanganisela - inhlanganisela amafonti ekhasini elilodwa noma idokhumenti. Udinga ukuqonda ukuthi yini amafonti khaxa ngaphezulu, futhi yini kangcono hhayi ukusebenzisa ekhasini elilodwa. Ngakho ungakwazi wenze iphrojekthi yakho ibe inothe, kuyoba likhanga kakhulu. Njengoba for ngcono, lapha unayo inombolo omkhulu amathuba ezahlukene. Ungashintsha ukugcizelela ukwenza ifonti ezinkulu noma ezincane, kwenze ngokugqamile noma i-ithalikhi, nokunye. Ungashintsha Isikhala line Isikhala phakathi izinhlamvu igama. Konke lokhu kudinga ukulungiselela sina, ngakho ukuthatha cwaningo kulezi zindaba futhi ngokoqobo kolwazi lwesonto lawo yesibili.
Ngesonto lesithathu okufanele sisetshenziselwe ukuhlola izici owesincane umbhalo sakhiwo. Ngisho noma uhlele idokhumenti ikhasi nanye, wena uyobe cishe kudingeka ubeke izakhi ezihlukahlukene ezingxenyeni ezahlukene kuleli khasi. Kubalulekile kakhulu ukuthi uyaqonda kuphi nokuthi yini okufanele Kuhlehliswe njengoba ibekwe kangcono eyodwa noma enye ingxenye ukuze isithombe jikelele kwaba ivumelane kakhulu. Ngo web design okubalulekile into ngokuvamile Liyindawo ezibalulekile, njengoba kukhona kakhulu kuncike ikhono kahle bachithe izakhi. Futhi e nemidwebo - umbhalo wakho kufanele uvumelane ngokuphelele ku isithombe jikelele, engeza ezinye izici kuhlangene nabo njalo njalo. Okubaluleke kakhulu - ufunde ukusebenzisa igridi typographical, ngakho ngokuthe ngqo ukuthi kuyokusiza njengoba ngokunembile futhi ngobuciko wabeka umbhalo ekhasini idokhumende.
Eqinisweni, ngemva kwamasonto amane, uyokulungela ukuthatha kunoma iyiphi oda engaphansi, okuyinto uzokwazi ukuba agcwalise isandla sakhe. Kodwa lokho kuleli cala kuyadingeka ngesonto eledlule? Uzodinga ukuxhuma iso lakho lengqondo futhi lokusungula - eqinisweni, njengoba kwaba njalo endabeni ka-design web, ukukhipha wonke idokhumenti can - akusiwona umsebenzi kunzima futhi kunalokho mechanical enjalo. Kukhona ebaluleke ukunemba, ikhono kahle ufaka izakhi nokunye. Kodwa iphrinta abanolwazi futhi ethandwa - kuyinto wokuqala nomkhulu kunabo bonke umculi, angakwenza, uyazi ukuthi sihlanganise amafonti epheshaneni, ukushintsha iphrojekthi yakho ukwenza kube esiyingqayizivele. Yilokhu okudingeka uqale ukufeza evikini eledlule ukuqeqeshwa kwakhe. Ngokwemvelo, ungatholi ukuba abe genius zokudala nje ngesonto, kodwa udinga ukukhomba kulezi zinsuku eziyisikhombisa izinjongo ezifana, ukuba wayevele inqolobane ezithile. Ungakwazi bacale kutfutfukisa unendlela yakhe, umuzwa umbhalo, nokunye, yilokho ngeke ufunde izincwadi ukuba yilowo nalowo mlisa kumele ibe ngeyakhe.
Lapho lwale nyanga kuyoba phezu, uzoqaphela ukuthi ukude nemidwebo uchwepheshe - kodwa usuwazi okuningi, futhi okubaluleke - uyazi ukuthi kungakanani. Lokhu kuyoba isinyathelo sakho sokuqala ezweni elisha, okungase esikhathini esizayo ukuze alethe kuwe imali enkulu, futhi okubaluleke - injabulo emsebenzini zakho ozithandayo.
Umsebenzi Yiqiniso Order
Kumile Optom.prodazhi Nge Isitolo Inthanethi
"Netologiya": libuyekeza abafundi
Izinzuzo ukufunda isiNgisi ngokusebenzisa Skype
Indlela Lungiselela kuseshini ngesikhathi esifushane. Indlela ukulanda umsebenzi Yiqiniso
Yalta impesheni. Relaxing iholide eCrimea
Kanjani ukulungisa slouch umntwana futhi omdala
I-datura emhlophe: ikhula kusuka kumbewu
Beautiful yezimila amahlamvu e-maple
Indlela ewusizo ihhashi amafutha?
Kulungile kanjani ukuphakanyiswa ebhodini lokugeza? Ibhati elinomshanelo: imithetho, izinkomba kanye nezinkomba zokuphikisa
Indlela thunga isiketi ezifincizekile ezifana nezimpiko ngokwakho?
Vintage - Iyini?